Belukar, Gili Trawangan - I-Airbnb
Gili Trawangan, West Nusa Tenggara, i-Indonesia
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Belukar
I-Belukar yakhiwa ngo-2014 futhi itholakala emasimini kakhukhunathi anokuthula e-Gili Trawangan. Sinamagumbi okunethezeka angu-14 kanye nendawo yokudlela ehlinzeka ngezinhlobonhlobo zokudla, ukudla okulula, ama-tapas neziphuzo, konke kusethwe endaweni yokubhukuda engama-25m.
Amakamelo kanokusho, ngalinye lina:
I-veranda yokubuka iphuli
Umbhede osayizi wendlovukazi
Umbhede wosuku (ongaguqulwa ukuze unikeze umbhede wesibili wokuhlala kathathu noma ukwabelana ngamawele)
Ifenisha ye-teak ye-Bespoke
I-air-conditioning nefenisha yesilingi
Amagumbi okugeza en-suite anamanzi ashisayo ashisayo namathawula
Ibhulakufesi elihambisanayo lansuku zonke
Ifriji encane/ibha enkulu
Amanzi okuphuza amahhala
Indawo enkulu yokugcina
Inkonzo yasekamelweni yansuku zonke
4.83 (izibuyekezo ezingu-202)
Eminyakeni yamuva inqwaba yezincwadi zokuhamba, imihlahlandlela kanye nezithasiselo zamaphephandaba zicule izindumiso zikaGili Trawangan. Ngempela, abaningi banikeze isiqhingi esincane isincomo "sokufanele sivakashelwe" futhi basasibheka njengemfihlo egcinwe kakhulu yase-Indonesia ... ipharadesi elikude nje neBali eqinile futhi egcwele abantu.
Ababhali bonke bayakuvuma ukukhanga okukhangayo kwesiqhingi samakhorali asendulo esinolwandle olufudumele, olugcwele izimfudu noxhaxha lwezinhlanzi ezimibalabala zasezindaweni ezishisayo. Kodwa futhi bayakubona ukuthuthukiswa kwesimanje okulethe isiqhingi izinsiza kanye nezinsiza manje ezithathwa njengezibalulekile eholidini lesimanje elivelele kuyilapho zisaphikisana nokuhamba ngezimoto kwanoma yiluphi uhlobo.
Ku-Gili Trawangan entsha manje isihlala kalula eduze kwendabuko. Impilo engashintshile yasesigodini sase-Indonesia, izimakethe zendawo, kanye nezinkomo eziklaba emasimini esundu anomthunzi kuhlangana nezindawo zokudlela zamazwe ngamazwe, amathilomu namabha anempilo yasebusuku enempilo, ama-ATM, izitolo zemisebenzi yezandla kanye nemidlalo yasemanzini neminye imisebenzi enikeza i-Gili Trawangan ubukhulu bayo obungeziwe kanye nokukhanga. I-Gili Trawangan ingase yaziwa ngokuthi "isiqhingi sephathi" kodwa igcina ithuba lemvelo nokuthula futhi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Gili Trawangan namaphethelo